Tirada Dad ku Dhintay Roobab ka Da’ay Gobolka Awdal | Dhaymoole News
Tirada Dad ku Dhintay Roobab ka Da’ay Gobolka Awdal
Boorame (Dhaymoole)- Ugu yaraan shan qof, ayaa lagu soo waramayaa in ay ku dhinteen daadad iyo fatahaado ka dhashay roobab laxaad leh oo labadii maalmood ee u danbeeyay ka da’y gobollada galbeedka.
Maayarka degmadda Boorame Maxamed Xuseen Maydhane ayaa BBC-da u sheegay in shan qof ay ku dhinteen roobabkan gaar ahaana degmooyinka Baki iyo Boorame ee gobolka Awdal.
Waxaanu sheegay in magaaladda Boorama ay roobabku ku dileen 3 qof, roobabkii ka da’ay maalmihii la soo dhaafay isagoo intaa ku daray in degmada Baki Danab uu ku dhacay hooyo iyo ilmo yar oo ay dhashay, halka saddex qof oo kalena ay ku dhaawacmeen danabkaasi.
Sidoo kale degmada Boorama ayaa dooxa loo yaqaanno Camuud waxa uu qaatay habeen hore laba qof oo kala ahaa nin iyo gabadh kadib markii gaadhi ay saarnaayeen uu daadku qaatay.
Waxa kaloo habeen hore dooxa loo yaqaano Huluuq oo u dhaw magaaladda Arabsiyo ee gobolka Gabiley la sheegay in daad ku qaaday baabuur siday dad rakaab ah, iyadoo halkaasi uu ku dhintay ninkii dirawalka ahaa oo magaciisa lagu sheegay marxuum Maxamed Aadan Yuusuf balse dadkii rakaabka ahaa ay ka badbaadeen.
Dhinaca kale masuuliyiinta gobollada iyo degmooyinka dalka ayaa digniinno ka soo saaray dhibaato kale oo ay gaystaan roobabku, oo ay dadweynaha xoolo dhaqatadda ah iyo kuwa safarka ahba uga digayaan in ay ka fogaadaan meelaha dooxooyinka ah.
Iyadoo meelaha ugu badan ee ay roobabku dhibaatada ka gaystaan xilliyada daadadku soo rogmadaan ay yihiin dooxyadda oo marka ay sidan oo kale roobab badani da’aan ay dhacdo in ay qaadaan gaadiidka safraya.
Meelaha ay inta badan dooxyadu dadka ku qaadaan ayaa ah inta u dhaxaysa laga soo bilaabo Boorama ilaa Berbera oo ay ku yaalaan dooxyadda ugu badan maadaama oo dooxyadda ku yaalla jidkaasi aanay intoodda badani lahayn buundooyin ay biyuhu hoos maraan.